Modafinil: Kedu ka m ga-esi were Modafinil uzuzu? | Azu na-emepụta steroid
Modafinil: Kedu ka m ga-esi were Modafinil uzuzu?
/blog/modafinil/Modafinil: Kedu ka m ga-esi were Modafinil uzuzu?
Ihe na 10 / 30 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na modafinil. O nwere 3 Comments.
Kedu ụdị ọgwụ bụ modafinil raw ntụ ntụ?
modafinil raw ntụ ntụ bụ ọgwụ na-akwalite ntụrụndụ.
a na-ejizi ntụ ntụ ntụzi na-eme ihe iji na-emeso ụra dị oke ụra nke ụbụrụ na-ehi ụra, usoro ọgwụ ọjọọ, ma ọ bụ na-agbanwe ọrụ ụra nke ihi ụra.
modafinil raw ntụ ntụ pụkwara iji maka ebumnuche ndị edepụtara na ntuziaka ọgwụ a.
Kedu dka Modafinil Ọrụ?
Modafinil bụ ọgwụ a maara nke ọma iji mee otu ihe: nọgide na-amụ anya.
Ka ọ dị ugbu a, ị nụla na onye ọ bụla si na Tim Ferriss ruo Dave Asprey ka President Obama weghaara Modafinil na ụfọdụ isi.
Ha abụghị naanị ha.
Ndị na-ụlọ ahịa, ndị dọkịta, ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọ bụla m maara mara banyere Modafinil ma ọ bụ jiri ya onwe ha.
N'agbanyeghị na ọ na-arịwanye elu, mmadụ ole na ole maara otú Modafinil si arụ ọrụ n'ezie.
Nke ahụ bụ obere okwu, nyere 1) ọtụtụ n'ime ihe Modafinil ji mee ihe-aha, nke pụtara na ọ na-eme na labs random na India, na 2) ọ ga-eme ka ewu ewu karịa oge.
Dị ka nke a, ọ bara uru ịmaliteghachi azụ maka nkeji ma mụta banyere obere mpi a na-acha ọcha ka anyị na-ewe maka ọrụ.
Kedu ihe bụ Modafinil usoro?
Nye ọtụtụ ndị nwere ezi ahụ ike, 30-50 mg nke modafinil ga-abụ ọtụtụ. Ọ na-ewe oge 6-8; Were ya n'ụtụtụ, ma ọ bụ na-enweghị nri. Ekwesịrị m ịsị na modafinil bụ ọgwụ ọgwụ; ị nwere ike ịgwa dọkịta gị banyere ya. E nwere ebe ị nwere ike nweta ya na netwọk; Achọghị m ijikọta ha n'ihi nsogbu iwu ... ma ị nwere ike ịchọta isi iyi. N'ezie, ọ na-adaba adaba.
Kedu ka m kwesịrị isi mee Modafinil?
Were modafinil kpọmkwem dị ka dọkịta gị si chọọ. Soro ntuziaka niile na akara aha gị. Ejila ọgwụ a buru ibu ma ọ bụ obere ma ọ bụ karịa ogologo oge.
Modafinil nwere ike ịbụ agwa na-akpụ. Ejila onye ọzọ na-emekọrịta ihe, karịsịa onye nwere akụkọ ihe mere eme nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Debe ọgwụ ahụ na ebe ndị ọzọ na-apụghị ịbanye na ya. Ịre ma ọ bụ inyefe ọgwụ a megidere iwu ahụ.
A na-ewerekarị modafinil kwa ụtụtụ iji gbochie ụra ehihie, ma ọ bụ 1 hour tupu mmalite nke ngbanwe ọrụ iji na-emeso nsogbu ụra na-arụ ọrụ oge.
Gụọ ihe niile gbasara ọrịa, ndị nduzi ọgwụ, na akwụkwọ ntụziaka maka gị. Jụọ onye dọkịta gị maọbụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Ị nwere ike iji mbadamba nkume ma ọ bụ na-enweghị nri.
A na-enyekarị modafinil maka izu 12 ma ọ bụ obere.
Ọ bụrụ na ị na-ewere modafinil iji na-emeso ụra nke ihe mgbochi ụra na-egbochi, ị nwere ike na-emeso gị na nrụgide ụgbọ elu na-aga n'ihu (CPAP) igwe. Igwe a bụ windo ikuku nke ejikọtara ya na ihe nkpuchi nke na-agbapụ ikuku na-agba ume n'ime imi gị mgbe ị na-ehi ụra. Mgbapụta anaghị eme ka ị na-eku ume, mana ike nke ikuku na-enyere aka ịmeghe ikuku gị iji gbochie igbochi.
A pụrụ nyochaa ojiji na usoro ihe eji eme ihe n'elu, na usoro ọgwụgwọ dị iche iche ga-adịgasị iche site na mmadụ gaa na onye ọzọ, karịsịa site n'iji ịdị ọcha dị mma modafinil raw ntụ, ma kwesịkwuo nlezianya anya iji ya mee ihe.
Ihe ndi ozo banyere ihe bara uru,Nabata ebe a.
Modafinil - Ọrịa Obere Ọgwụ na Uru Ntuzi
Ịzụta Modafinil uzuzu: Ị ga-ama ezigbo ọgwụ ị na-ere!
Ọ bụ eziokwu na Modafinil na-enyere ụbụrụ aka na-arụ ọrụ nke ọma Mgbe ọ nwụsịrị?
ọrụ ederede dị ọcha04 / 12 / 2018 na 5: 53 am
Nke a bụ ihe na-enye anyị ụfọdụ eziokwu na ozi ... Enyemaka dị oke aka ...
Na, nke a bụ ezigbo blog.
Ọ na-enye m ozi ndị ọzọ ma nwee olileanya ịnọgide na-arụ ọrụ ndị ka mma.
nkewa12 / 10 / 2017 na 12: 09 pm
Daalụ maka ozi ọma gị! Enwere m obi ụtọ ịgụ ya, ị nwere ike ịbụ nnukwu edemede. M cheta ihe ndị na-egosi na ị na-ebute akara gị na blog gị
azụ otu ụbọchị. Achọrọ m ịkatọ gị ka ị nọgide na-arụ nnukwu ọrụ gị, nwee ụbọchị nick!
Modafinil: Ebe ịzụta nnukwu Modafinil ntụ ntụ	Kedu ihe iji ọgwụ Nandrolone na-eme ihe na-adịghị mma?